ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၉ - ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် အခမဲ့ ဂီတပွဲများ - Institut français de Birmanie
ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၉ – ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် အခမဲ့ ဂီတပွဲများ
| | Institut Français de Birmanie	| Yangon & Mandalay	|	 Posted3လ ago
ဂီတပွဲတော် ၂၀၁၉ – ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် အခမဲ့ ဂီတပွဲများ။
ဂီတပွဲတော် သို့မဟုတ် ဂီတနေ့ (La Fête de la Musique) ဟာ ရန်ကုန်မြို့ကို တတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ မန္တလေးမြို့မှာပါ ပထဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
La Fête de la Musique ဂီတနေ့ကို ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေပြီး ဂီတဝါသနာရှင်များနှင့် ပညာရှင်များက ဂီတမှုပြုကြစို့ ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာ ပူးပေါင်းတင်ဆက်သွားမယ့် ပွဲတော်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနဟာ ယခုနှစ်မှာလည်း “ နေရာတိုင်းမှာ ဂီတပါ” လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွင်းနေရာအနှံ့အပြားမှာ အများပြည်သူနားဆင်နိုင်မယ့် ဂီတအမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ အခမဲ့ဂီတပွဲတွေကို စီစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ တေးဂီတမျိုးစုံကို ညနေခင်းတစ်ခုတည်းမှာ နားထောင်ခံစားနိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားလိုက်ကြပါစို့ မိတ်ဆွေများ။
မြေပုံနှင့်တကွ ပါဝင်မည့်နေရာများအကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် >>> http://tiny.cc/fdlm19
Yangon’s “ Blues Corner Band” will give youanight to remember with blues & rock. Enjoy the live music on the highest rooftop bar in Yangon.
About Institut Français de Birmanie
From:2019-06-22 12:00 AM
To:2019-06-22 12:00 AM